Gool FM | Barnaamijyada	Thursday, February 11th, 2016	Home
Barnaamijyada Gool FM waxay isugu jiraan kuwa soo gala maalin kasta, qaar toddobaadkiiba hal maalin soo gala iyo kuwo maalinta Jimcaha gaar u ah.
Barnaamijka Qeexidda Barnaamijka Waqtiyada la baahiyo
Warka waa waxa ugu badan ee soo noqnoqonaya. Waxaa jiraya warar waaweyn oo faahfaahsan iyo warka saacadda oo kooban.Warka Idaacaddu wuxuu noqonayaa 100% mid lagu soo qaato arrimaha cayaaraha. War siyaasadeed haba yaraatee lagama baahiyo Gool FM
Waxaa jira 3 war oo waaweyn oo soo kala gala 8da aroornimo, 2da duhurnimo, iyo 8da fiidnimo. Waxaa intaas dheer in saacad kasta uu soo galayo warka saacadda oo kooban.
Waa barnaamij gaar u ah cayaaraha dalka iyo kuwa Soomaalida qurbaha Waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu soo qaato:Taariikhda kooxaha dalka ka jira iyo sidii loo tayeyn karo iyo guud ahaan horumarinta isboortiga dalka. Waxaa fursad la siinayaa kooxaha dalka ka dhisan, iyadoo la wareysanayo cayaartoyda, tababarayaasha iyo madaxda xiriirrada dalka.
Maalin kasta (marka laga reebo Jimcaha) 09:30 subaxnimo. Waxaa lagu celiyaa 3:30 galabnimo.
Barnaamijkan waxaa looga hadlayaa cayaartoyda caalamiga ah, iyadoo si gaar ah loogu soo qaadanayo: Suuqa kala-iibsiga cayaartoyda, xanta cayaartoyda ee suuqa ku jirta; Taariikhda cayaartoyda caalamiga ah, waxaana maalintiiba la soo qaadanayaa hal ciyaartoy.
Maalin kasta (marka laga reebo Jimcaha) 10:05 subaxnimo. Waxaa lagu celiyaa 04:05 galabnimo.
Waa barnaamij dood ah oo lagu faaqido arrin ku saabsan cayaaraha dalka iyo dibeddiisa: Waxaa laysku keenayaa laba kooxood ama laba qof iyo ka badan oo kala taageersan laba kooxood ama cayaartoy. Ka sokow dadka doodda ka qeybgalaya waxaa fursad la siinayaa dadweynaha si ay uga doodaan arrintaas.
Maalin kasta (marka laga reebo Jimcaha) 11:05 subaxnimo.
Waa barnaamij lagu soo bandhigo wax kasta oo ku saabsan cayaaraha hadday noqon lahayd kooxaha, cayaartoyda, horyaallada, natiijooyinka, iwm.
Maalin kasta (marka laga reebo Jimcaha) 12:05 duhurnimo. Waxaa lagu celiyaa 05:05 galabnimo.
Waa barnaamij lagu faaqido wararkii ugu weynaa ee isboortiga ee maalintaas ka dhacay dalka gudahiisa iyo dibeddiisa. Waxaa sidoo kale lagu soo qaataa wararkii soo kordhay.
Habeen kasta (marka laga reebo habeenka Jimcaha) 9:30 fiidnimo.
Tebinta Tooska ah ee Cayaaraha (120 daqiiqo)
Waa barnaamij lagu soo tebinayo dadka cayaarta ugu muhiimsan ee markaasi jirta: Waxaan xoogga saareynaa cayaaraha dalka gudihiisa iyo horyaallada reer Yurub iyo cayaaraha gudaha dalka ka socda oo si toos ah ay dadweynuhu idaacadda kala socon karaan.
Mar kasta oo ay jiraan cayaaro toos ah..
Waa barnaamij dhageystayaasha siinaya fursad ay ku doodaan, gaar ahaan kuwa isugu yimaado garoomada cayaaraha. Weriyeyaasheena ku sugan garoomada ayaa fursad u siiya daawadayaasha inay soo bandhigaan aragtidooda ku aaddan hadba mowduuca laga hadlayo.Barnaamijku wuxuu sidoo kale soo bandhigaa ciyaaraha iyo heesaha ay soo bandhigaan taageerayaasha kooxaha.
Habeen kasta oo Sabti, Isniin iyo Arbaco ah laga billaabo 07:05 fiidkii.
Wuxuu barnaamijku ka hadlaa taariikhda kooxaha (dalka gudahiisa ka dhisan iyo kuwa shisheeye) iyo horyaallada caalamiga ah. Waxaa sidoo kale barnaamijka looga hadlaa sooyaalka cayaaraha kale sida kubadda kolayga, laliska, iwm.
Habeen kasta oo Axad, Talaado, iyo Khamiis ah laga billaabo 07:05 fiidkii.
Isboortiga & Nabadda
Wuxuu barnaamijku ka hadlaa kaalinta ay cayaaruhu ka qaadan karaan nabadda iyo horumarka.
Sabti kasta 02:30 duhurnimo
Waxaa barnaamijka lagu casumaa qof muhiim ah oo laga wareysto arrimo kala duwan.
Axad kasta 02:30 duhurnimo
Isboortiga iyo Qurbaha
Barnaamij soo bandhiga howlaha isboorti ee ay wadaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibeddiisa
Isniin kasta 02:30 duhurnimo
Barnaamij dadka bara shruucda isboorti. Wuxuu cayaartoyda ku dhiirrigeliyaa inay yeeshaan anshax wanaagsan, wuxuuna ka hortagaa in taageerayaashu ay sameeyaan fowdo.
Talaado kasta 02:30 duhurnimo
Haweenka & Isboortiga (20 daqiiqo)
Barnaamij ka hadla kaalinta haweenku ku leeyihiin isboortiga. Wuxuu soo bandhigaa guulaha haweenka Soomaaliyeed ka gaareen isboortiga.
Arbaco kasta 02:30 duhurnimo
Barnaamij ka hadla nolosha bulsho ee cayaartoyda, tababarayaasha, iwm. Wuxuu ka faalloodaa waxay jecel yihiin, waxay neceb yihiin, qoyskooda, ganacsigooda, iwm
Khamiis kasta 02:30 duhurnimo
Maadaama maalinta jimcaha ay dhageystayaasheenu ka nasanayaan howlihii toddobaadka, barnaamijyadeenu waa kuwo fudud.
Toddobaadka iyo Isboortiga
Waa barnaamij dib u eegaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee isboortiga dalka iyo dibeddiisa.
Jimce kasta 09:30 subaxnimo
Dowrka Suxufiga ee Horumarinta Isboortiga
Waa barnaamij xoogga saaro kaalinta uu suxufigu ka qaadan karo horumarinta isboortiga Soomaaliya. Waxaa toddobaad walba lagu martiqaadaa weriye ka howl gala warbaahinta Soomaaliyeed.
Jimce kasta 10:05 subaxnimo
Tartanka Aqoonta Isboortiga
Waa barnaamij sare loogu qaadayo aqoonta dhageystayaashu u leeyihiin arrimaha isboortiga. Barnaamijka ayaa su’aalo weydiinaya dhageystayaasha, waxaana looga qeybgeli karaa khadka taleefoonka oo kaliya si dadweynaha kale u ogaadaan in su’aashii laga jawaabay iyo in kale. Qofkii su’aasha ka jawaaba wuxuu helayaa abaal-marin.
Jimce kasta 02:30 duhurnimo
Waa barnaamij dadweynaha fursad u siiya ay isku dhaafsadaan salaamo iyo hambalyo.
Jimce kasta 07:05 fiidnimo
Fanka & Isboortiga
Wuxuu barnaamijka ka hadlaa xiriirka ka dhexeeya fanka iyo isbiirtiga, waxaa bahda fanka lagu dhiirrigeliyaa inay suugaan ka sameeyaan isboortiga.
Jimce kasta 08:30 fiidnimo.
Waa kee laacibka Real Madrid ee iska diiday Hanti fara badan oo ay u soo bandhigtay koox Shiinees ah?
(Belo Horizonte), 11 Feb 2016. -Kooxda Kubadda ...	”Donnarumma da’diisa waa ka wayn yahay dibeddana aad baa looga hadal hayaa”
(London) 11 Feb 2016 - Marco Amelia ayaa ...	SOMALIA VS QADAR: Sidee & halkee ka daawan/dhegeysan kartaa kulankan xiisaha badan? (Raac awaamiirtan!)
(Doowxa) 11 Feb 2016 - Xulka da'yarta 11-jirrada ...	”Umaddoo dhanbaa arkaysay in 98-kii Inter laga eexday” – Gianluca Pagliuca
(Roma) 10 Feb 2016 - "Ma kulankii Juve-Inter ...	Garsoore Talyaani ah oo maxkamad la tiigsanaya arrin lagu eedeeyay oo Juventus la xiriirta! (Maxaa dhacay?)
(Roma) 11 Feb 2016 - Jamciyadda Garsoorayaasha Talyaaniga ...	YAAB: Taliye Booliis oo loo magacaabay Guddoomiye Xiriir Kubbad Cag!
(Bankok), 11 Feb 2016 – General hore oo ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro